सावधान ! यसकारण खस्छ महिलाकाे पाठेघर र यसबाट यसरी बच्न सकिन्छ, जान्नुहाेस् - ज्ञानविज्ञान
नेपाली महिलाहरुको प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरु मध्ये पाठेघर झर्ने (खस्ने) ‘जसलाई आङ खस्ने पनि भनिन्छ’ एक मुख्य समस्या हो ।अहिले पनि ग्रामिण भेगमा बसोबास गर्ने कतिपय महिलाहरुले यसलाई स्वास्थ्य समस्याको रुपमा लिने गरेको पाइदैन् । बरु उनीहरुले बच्चा भएपछि हुने स्वभाविक असरका रुपमा लिने गरेको पाईन्छ ।
यस्तो बेला टुक्रुक्क बस्दा केही अप्ठ्यारो हुन्छ र ढाड पनि दुख्छ ।खोक्दा, टुक्रुक्क बस्दा, बल गरेर कन्दा पाठेघरको मुख योनीको प्वालमा देख्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा पाठेघरले पिसाबको थैलीलाई थिच्ने भएकोले छिनछिनमा पिसाब लाग्ने, कम्मर दुख्ने, खोक्दा, भारी बोक्दा योनीको मुखमा केही डल्लो आएर बसेको जस्तो हुन्छ ।
पुरै ठाउँ छोडी केही भाग योनी बाहिर पनि निस्कन सक्दछ । खोक्दा, हास्दा अलिअलि पिसाब चुहिने पनि हुन सक्छ ।बाहिर निस्केको पाठेघरमा घाउ हुने, संक्रमण हुने, हिंड्न गाहृो हुने, ढाड दुख्ने हुनसक्छ ।
यौन सम्पर्क गर्दा अफ्ठयारो हुन सक्छ । जसले गर्दा श्रीमानसंगको सम्बन्ध चिसो भएर झगडा हुने र बिस्तारै बिछोड र श्रीमानले अर्को श्रीमती ल्याउने अवस्थाको सृजना हुन सक्छ । सधैको शरीरिक समस्याबाट मानसिक तवरले पनि विछीप्त हुन सक्छ ।
सेतो गन्हाउने पानी आउने हुनाले समूहमा संगै बस्ने मान्छेलाई गन्हाउने डरले समूहमा नबस्ने बसे पनि एक्लै बस्ने र अन्तमा एक्लो महशुस हुन सक्छ ।
पाठेघर झर्नबाट (खस्नबाट) बच्ने उपायहरु
कसरी हुन्छ पाठेघरको मुखको क्यान्सर ? यस्तो छ बच्ने उपाय
नसर्ने रोगमध्ये महिलामा देखिने पाठेघरको मुखको क्यान्सर पनि अग्रस्थानमा रहेको छ । पाठेघरको मुखको क्यान्सर भनेको उक्त अंगमा अनियन्त्रित कोषिकाहरुको वृद्धि हुनु हो ।
— क्यान्सर धेरै फैलिसकेको अवस्थामा भने खुट्टा सुन्निने, ढाड तथा कम्मर दुख्ने हुन्छ । साथै दिसा पिसाबमा पनि समस्या देखा पर्न सक्छ।
—पाठेघरको मुखको क्यान्सरका रोगथामको लागि समय समयमा आईभिएफ परीक्षण गर्नुपर्छ । गर्भाशय श्राव परीक्षण गर्दा गर्भाशयको क्यान्सर शुरुमै पहिचान गरेर उपचार गर्न सकिन्छ ।
–गन्हाउने पानी बग्ने, महिनावारी अनियमित हुने, महिनावारी बन्द भइसकेको महिलाहरुमा पुनः रगत देखा पर्ने र यौन सम्पर्क पछि रगत देखा पर्ने जस्ता लक्षण देखा परेमा परीक्षण गर्नु जरुरी हुन्छ ।
Don't Miss it सावधान ! एलर्जी बनाउला नयाँ लुगा लगाउँदा होस गर्नुहोस्
Up Next यसरी गर्नुपर्छ दाँतमा ब्रस, जान्नुहाेस्र
कलेजो कसरी बिग्रिन्छ, जोगाउन के गर्ने ? सम्पुर्ण जानकारी एकै ठाउँमा